समाचार - रेनकोट कसरी राख्ने
रेनकोट कसरी राख्ने
१. टेप रेनकोट
यदि तपाईंको रेनकोट रबरइज्ड रेनकोट हो भने तपाईंले प्रयोग गरिसक्नु भएको कपडालाई शान्त र हावामा राखिएको ठाउँमा राख्नु पर्छ, र रेनकोट सुकाउनु पर्छ। यदि तपाईंको रेनकोटमा फोहोर छ भने, तपाईं आफ्नो रेनकोटलाई सपाट टेबुलमा राख्न सक्नुहुन्छ, र सफा पानीमा डुबाएर नरम ब्रशको साथ हल्का साक्रब यसमा धुलो धुनुहोस्। टेप गरिएको रेनकोटलाई याद गर्नुहोस् यो हातले धपाउन सकिदैन, सूर्यको एक्लो पर्दा छोडिनुहोस्, र आगोमा जल्न सकिन्न, र ती क्षारीय साबुनहरूले सफा गर्न सकिदैन। यसको उद्देश्य रेनकोट वृद्धावस्थाबाट बच्नु हो। वा भंगुर बन्नुहोस्।
टेप रेनकोट तेलसँगै राख्न सकिदैन, र यसलाई भण्डारण गर्दा यसलाई स्ट्याक गर्नुपर्छ। रेनकोटमा भारी चीजहरू नराख्नुहोस्, र यसलाई तातो चीजहरूको साथ नराख्नुहोस् यसलाई रेनकोटमा थिच्नबाट रोक्न। फोल्डहरू, वा क्र्याकहरू। रेनकोटलाई टाँस्नबाट जोगाउन रबरइज्ड रेनकोटको बक्समा केही मोथबलहरू राख्नुहोस्।
२ रेनप्रूफ कपडा रेनकोट
यदि तपाईंको रेनकोट एक रेनकोट हो, जब वर्षाबाट पानी ओसिलो हुन्छ, रेनकोटमा पानीको पानी उछाल गर्न तपाईं आफ्नो हात वा फर टोपी प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न, किनकि त्यसो गर्दा रेनकोटमा फाइबरको वाटरप्रुफ प्रदर्शन खराब हुन सक्छ।
वर्षाकोटहरू लगातार धुनेको लागि उपयुक्त छैनन्। यदि तपाइँ यसलाई बारम्बार धुनुहुन्छ, यो रेनकोटको वाटरप्रूफ प्रदर्शन कम हुने सम्भावना छ। यदि तपाईंलाई तपाईंको रेनकोट एकदम गन्दा छ जस्तो लाग्छ भने, तपाईं सफा पानीको साथ रेन्कोट बिस्तारै हल्लाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि धुले रेनकोटलाई सुक्नुहोस्, र यसलाई सुक्नको लागि लटकाउनुहोस्। जब रेनकोट पूर्ण रूपमा सुक्खा हुन्छ, फलाम मात्र लिनुहोस् यसलाई जलाउनुहोस्। यदि तपाईं रेनकोट टाढा राख्न लाग्नु भएको छ भने, तपाईंले लुगा फेर्नु अघि पूरै सूख्नु पर्छ। यो रेनकोटमा रहेको मोमी पदार्थको रासायनिक प्रतिक्रियालाई ओसिलोपनाले रोक्न हो, जसले रेनकोट फफूल्का पार्छ।
Pla. प्लास्टिक फिल्म रेनकोट
यदि तपाईंको रेनकोट एक प्लास्टिक फिल्म रेनकोट हो, जब रेनकोट भिजा हुन्छ, तपाईंले तुरुन्तै रेनकोटमा सुक्खा कपडाले पानी पछाडि पार्नु पर्छ, वा रेनकोटलाई शान्त र सुख्खा ठाउँमा लैजानुहुन्छ र सुकाउनु पर्छ।
प्लास्टिक फिल्म रेनकोट सूर्यमा पर्दाफास गर्न सकिदैन, आगोमा बेक गर्न दिनुहोस्। यदि तपाईंको रेनकोटमा झुर्री हालेको छ र फलामले इस्त्री गर्न सकीदैन भने तपाईं रेनकोटलाई तातो पानीमा minute० देखि degrees० डिग्री एक मिनेटको लागि भिजाउन सक्नुहुन्छ, त्यसपछि यसलाई बाहिर निकाल्नुहोस् र यसलाई समतल टेबलमा राख्नुहुनेछ। तपाइँको हातहरु संग फ्लिटल तपाईको रेनकोट प्रयोग गर्नुहोस्। रेनकोटको विकृतिबाट जोगिन रेनकोटलाई नखोज्नुहोस्। यदि प्लास्टिक रेनकोट एक लामो समय को लागी प्रयोग गरीन्छ, यो अपमानजनक वा क्र्याक गर्न सजिलो छ। यदि रेनकोटमा आँसु धेरै ठूलो छैन भने, त्यसो भए तपाई आफैले यसलाई ठीक गर्न सक्नुहुन्छ।
मर्मत विधि यो छ: फिल्मको एक सानो टुक्रा राख्नुहोस् जहाँ रेनकोट फाडिएको छ, र त्यसपछि फिल्मको माथि सेलोफेनको एउटा टुक्रा राख्नुहोस्। फेरी यसलाई इस्त्री गर्न बिजुली फलामको प्रयोग गर्नुहोस् ताकि फिल्म मर्मत कार्य गर्नको लागि फाटिएको उद्घाटनमा टाँसिन सकीन्छ। रेनकोटहरू मर्मत गर्दा, हामीले एउटा कुरा याद गर्नुपर्दछ: रेनकोटहरू सियोसंग सिलाउन सकिँदैन। अन्यथा, यसले रेनकोटको साथ बढी समस्या ल्याउने सम्भावना छ।